Sidee Behmaster Naqshadeeyay Waayo-aragnimada Martigelinta WordPress ee ugu dhaqsaha badan | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Sidee Behmaster Naqshadeeyay Waayo-aragnimada Martigelinta WordPress ee ugu dhaqsaha badan
Sidee Behmaster Naqshadeeyay Waayo-aragnimada Martigelinta WordPress ee ugu dhaqsaha badan
2016, kooxdayadu waxay dejisay inay sameyso BehmasterHorayba waxqabadka sare ee WordPress martigelinta xitaa si dhakhso leh. Safarkaas waxa uu ku dhamaaday in aanu ka guurnay oo aanu xoojinayno kaabayaasheena oo dhan ee adeeg bixiyayaasha badan una gudubnay Google Cloud Platform (GCP).
Si fiican u seexo habeenkii Behmaster's premium WordPress hosting
Dib u milicsiga maanta, doorashadaas ayaa door weyn ka ciyaartay in ay noo ogolaato in aan dhisno madal martigelinta WordPress ee aduunka ugu dhaqsiyaha badan.
Maqaalkan, waxaan si qoto dheer u dhex geli doonaa BehmasterAragtida iyo sababta aan u dooranay Google Cloud Platform inuu noqdo bixiyaha kaabayaasha. Gaar ahaan, waxaad baran doontaa sida Behmaster waxay isticmaashaa mashiinada farsamada ee C2-ka-habboon, marinka taraafikada qaaliga ah, iyo xirmo martigelinaya weel gaar ah si loogu qaado waxqabadka WordPress heerka xiga.
Google Cloud Platform iyo Mashiinnada Farshaxan
Google Cloud Platform waxa ay soo bandhigtaa mashiino farsamo oo kala duwan (VM). Ka fakar mashiinka farsamada gacanta sidii kumbiyuutar ku jira xarun xogeed oo si buuxda ugu qalabaysan CPU-yada, RAM, kaydinta SSD, iyo xidhiidh internet oo degdeg ah.
Sida kombiyuutarada caadiga ah, VM-yada waxaa lagu heli karaa qaabab kala duwan. Dhanka GCP, VM-yada waxaa loo kala saaraa qoysas kala duwan.
N1, N2, iyo E2 VMs waa mashiinno ujeedo-guud ah oo ku habboon culeysyo shaqo oo kala duwan, laakiin looma hagaajin hal shaqo. Waxay caan ku yihiin server-yada shabakadda, codsiyada ganacsiga, iyo xog-ururinta yaryar.
Mashiinnada M1 iyo M2 waxaa ku raran RAM loogu talagalay kiisaska isticmaalka degdegga ah ee xusuusta sida SQL-guud iyo keydka NoSQL iyo falanqaynta xogta xusuusta.
Mashiinnada C2 waa VM-yada "lagu-kormeeray" looguna talagalay naqshadaynta elektarooniga ah, ciyaaraha waxqabadka sarreeya, iyo culeysyada kale ee CPU-culus sida WordPress. Kuwani waa adeegayaasha Google Cloud Platform ee ugu dhaqsaha badan iyo waxa aanu halkan ka hirgelinno Behmaster.
Sidee Behmaster Wuxuu adeegsadaa Google Cloud Platform
Aragtidayada si aan u bixinno khibrada martigelinta WordPress ee la maareeyey, Google's C2 VMs ayaa door muhiim ah ka ciyaara laakiin maaha dhinaca kaliya ee muhiimka ah halkan (wax badan oo hoosta ku yaal).
Marka la barbar dhigo ujeeddada guud ee N1 VMs, waxaan cabbirnay qaabeynta C2 VM waxaana ogaanay inay 200% ugu dhakhsaha badan tahay WordPress.
Aan ku siino tusaale degdeg ah oo ku saabsan sida kombuyuutar-ku-habboonaanta VM-yada ay si toos ah u saameeyaan xawaaraha bogga WordPress.
Xudunta WordPress, plugins, iyo mawduucyada waxay ku qoran yihiin luqad barnaamijeed oo la yiraahdo PHP. Koodhka waxaa fuliya shaqaalaha PHP, kuwaas oo ah hababka asalka ah ee fuliya hawlo kala duwan laga bilaabo samaynta wicitaannada xogta si ay u abuuraan boggaga boggaaga si ay u soo diraan xaqiijinta dalabka dukaanka WooCommerce.
Si fudud loo dhigo, shaqaalaha PHP waa matoorada goobtaada WordPress.
Codsiyada aan la qarin ee goobta WordPress waxa ay u baahan yihiin in ay farsameeyaan shaqaalaha PHP. Maadaama waxqabadka CPU uu si toos ah u saameeyay sida ugu dhakhsaha badan ee shaqaalaha PHP ay u farsamayn karaan koodhka, CPUs-yada aadka u dheereeya ee Google's C2 VMs waxay saamayn toos ah ku leeyihiin xawaaraha boggaaga WordPress.
Maxaa Sameeya Behmaster Degdeg ah?
Ubucda ah Behmaster martigelintu waa xidhmo martigelineed weelaysan oo ay ku shaqaynayso fulinta caadada ah ee LXD, Nginx, MariaDB, iyo noocyadii ugu dambeeyay ee PHP. Xidhmada software-kayada waxa si gaar ah loogu habeeyay martigelinta waxqabadka sare ee WordPress ee Google Cloud Platform, waxaanu si joogto ah u hagaajinaynaa oo aanu u wanaajinaynaa marka xal cusub oo degdeg ah la helo.
Dhamaadka kaabayaasha, waxaan u isticmaalnaa Google's C2 VMS iyo Premium Tier network, kaas oo bixiya daahitaanka hoose iyo 30-50% dhaqsaha badan ee taraafikada iyadoo laga fogaanayo dhuumaha internetka ee dadweynaha intii suurtagal ah.
Marka la barbardhigo, Inta badan martigaliyayaasha kale ee WordPress meel bannaan ka faa'iidayso jaban iyo faybar aan ammaan ahayn oo kharashka ku baxaya xawaaraha shabakadda.
Marka la isku daro kaydkayaga martigelinta ee gaarka ah VM-yada ugu dhaqsaha badan Google, hagidda taraafikada, iyo khibradda qoto dheer ee kooxdayada, Behmaster wuxuu awoodaa inuu ka tuujiyo wiqiyad kasta oo waxqabad ah oo ka baxsan Google Cloud Platform si uu macaamiisheenna u siiyo khibrada martigelinta WordPress ee waxqabadka diirada saaraysa.
Iyada oo ay jiraan dad badan oo “waxqabadka diirada saaraya” WordPress martigelinaya, in kastoo, waxaad u malaynaysaa VM-yada ugu sarreeya sida mashiinnada GCP's C2 iyo marin-wareejinta taraafikada heer-sare ah inay noqon doonto caadada.
Nasiib darro, arintu sidaas maaha muuqaalka martigelinta WordPress ee maanta.
Behmaster waxay ku jirtaa hadaf si ay u bixiso khibrada martigelinta ugu dhaqsaha badan ee suurtogalka ah… oo dhammaan waxay ka bilaabmaan Google Cloud Platform's hillaaca degdega ah ee mashiinnada C2 ⚡️Riix halkan Tweet
Bixiyeyaasha Martigelinaya waxaa ku shaqeeya Google Cloud Platform
Behmaster ma aha martigeliyaha kaliya ee WordPress ee adeegsada Google Cloud Platform (GCP). Si kastaba ha ahaatee, waxaanu nahay martida kaliya ee adeegsata mashiinada farsamada ee C2 la kombuyuutareeyay iyo shabakada heerka sare ee Google-ka ugu dhaqsaha badan dhammaan macaamiisha.
Behmaster vs SiteGround
Bishii Maajo 2020, SiteGround waxay ku dhawaaqday casriyeyn lagu sameeyay N2 VMs ee goobaha lagu martigaliyay kaabayaasha Google Cloud Platform ee lix goobood oo xarunta xogta ah. War-saxaafadeedka SiteGround, waxay ku sheegeen ka guurista N1 una guurtay N2 VMs waxay dhalinaysaa 40% waxqabadka CPU dhakhso leh.
Marka la barbardhigo, Behmaster waxay taageertaa xarumaha xogta 29 oo leh 200% dhakhso badan C2 VM ee 12 gobol. Tani waxay ka dhigan tahay in marka lagu daro martigelinta server-yada aadka u dheereeya, waxaad sidoo kale si xeeladaysan u dhigi kartaa goobtaada meel u dhow dhagaystayaasha bartilmaameedka leh Behmaster!
Behmaster vs WP Engine
Bishii Ogosto 2019, WP Engine wuxuu ku dhawaaqay taageerada mashiinnada farsamada ee C2 ee la koriyey. Si kastaba ha ahaatee, kaliya macaamiisha qorshayaasha go'an laga bilaabo $290/bishii waxay heli karaan C2 VM-yada waxqabadka sare leh ee WP Engine.
At Behmaster, dhammaan macaamiisha waxaa lagu martigeliyaa C2 VMs. Haddii aad ku jirto qorshe bilow ama qorshe ganacsi, waxaad awoodi doontaa inaad ka faa'iidaysato adeegayaasha Google Cloud Platform ee ugu dhaqsaha badan oo aad hesho khibrada martigelinta WordPress ee ugu dhaqsaha badan iyada oo aan loo eegin inta ay le'eg tahay miisaaniyadaada.
Intee in le'eg ayay VM-yada C2-ku Hagaagsan yihiin Xisaabinta?
Inta aynaan gelin waxa sameeya Behmaster kala duwan, hubi kuwan isbarbardhigga waxqabadka ee qaar ka mid ah boggaga macaamiisheena ka dib markii ay u guuraan C2 VM-ga socodsiinta xirmooyinka software-keena gaarka ah.
Mareegaha wararka WordPress ee taraafikada sare leh ayaa socodsiinaya boqollaal codsiyo PHP ah daqiiqadiiba waxay hoos u dhigtay waqtigooda jawaabta 250ms ilaa 80ms iyagoo u beddelaya mashiinnada C2 - taasi waa 212.5% ​​korodhka waxqabadka!
Kor u kaca 212.5% ​​ee waxqabadka ka dib markii loo beddelay C2.
Matthew Woodward suuqgeynta internetka ee caanka ah iyo blog-ka SEO ayaa arkay hoos u dhac ku yimid waqtiga jawaabta laga soo bilaabo 750ms ilaa 385ms - taasi waa 94.8% waxqabadka ayaa kordhay!
Matthew Woodward wuxuu arkay 94.8% kor u kaca waxqabadka ka dib markii uu u dhaqaaqay C2.
Neuralab, oo ah shirkad ku guulaysata abaal-marin-shabakadda iyo horumarinta app-ka ayaa aragtay an 80% waxqabadka ayaa kordhay markii jawaabta goobtoodu ay hoos uga dhacday 450ms ilaa 250ms.
Neuralab wuxuu arkay 80% kor u kaca waxqabadka ka dib markii uu u dhaqaaqay C2.
Kuwani waa seddex ka mid ah sheekooyinka guusha badan ee aan aragnay tan iyo u haajiridda C2 VMs. Waxa ugu wanagsan macaamiisheena uma baahna inay wax sameeyaan si aad uga faa'iidaysato kor u qaadista waxqabadka - ma jiraan wax hagaajin ah, wax isbeddel ah oo ku yimaada code goobta, iyo kharashyo qarsoon ma jiraan.
Maxaa Sameeya Behmaster Kala Duwan Markay Timaaddo Xawaaraha
Markaa, hadda waxa aad u malaynaysaa sababta Behmaster wuxuu awoodaa inuu u soo bandhigo Google Cloud Platform adeegyadiisa ugu dhaqsaha badan qof walba, halka tartamayaashayadu ay ku xayiran yihiin adeegayaal gaabis ah ama helitaanka C2 ee qorshooyinka gaarka ah ee qaaliga ah oo keliya.
Jawaabtu si la yaab leh ayaa fudud: Behmaster waa shirkad si gaar ah loo leeyahay halka waayo-aragnimada macmiilku waa mudnaanta ugu sarreysa. Si aad u heshid dareenka gudaha BehmasterGo'aanka ah in dhammaan saldhigga macaamiisha loo raro C2 VMs, waxaan la hadlay maamulahayaga, Mark Gavalda.
The Behmaster DNA
Marka loo eego Mark, go'aanka loogu guurayo xisaabinta-habaynta C2 VMs waxaa si weyn u saameeya waxa uu ugu yeeray "Behmaster DNA”.
Tan iyo markii ay BehmasterBilowgii 2013:
"Waxaan had iyo jeer isticmaalnay agabka iyo shaqaalaha tayada ugu sarreeya iyada oo aan loo eegin kharashyada. Labada goobood ee ugu cad ee ay maskaxda ku soo dhacayso istaraatijiyadan ku jihaysan macmiilka waa taageerada iyo kaabayaasha dhaqaalaha.
Taageero heer sare ah waa mid had iyo jeer ka mid ah Behmastersifooyinka qeexaya. Inkasta oo aanu korodhay ilaa 2013, kooxdayada taageerada macaamiisha 24/7/365 waxa ay awoodeen in ay sii wadaan sub-2 daqiiqo waqtiga jawaabta iyo a 97% qiimaynta ku qanacsanaanta macaamiisha sanadka 2021. ”
U fiirso waxa qaar ka mid ah macaamiisheena ay ka yiraahdeen khibradooda martigelinta WordPress Behmaster!
Ku xooji awoodaha degelkaaga WordPress ee kaabayaashayada Google Cloud ee dabacsan. Eeg qorshayaashayada.
BehmasterSafarka C2 VMs
Kahor intaanan u dhaqaaqin waxqabadka sare ee C2 VMs, waxaan isticmaalnay GCP's ujeeddada guud ee N1 VM-yada iyada oo loo marayo shabakada Google's Premium Tier. Iyadoo N1 VM-yadu ay horeba noo siiyeen waxqabad hufan, Google ayaa daah-furka mashiinnada C2 waxay soo jiidatay xiisahayada goor hore. Dhab ahaantii, Mark wuxuu u safray xafiiska Google ee Zurich si uu u eego C2 VM-yada markii ay ku jireen wajigoodii "tijaabada alfa".
Waxay ahayd jacayl markii hore… dunta!
Mark wuxuu ka tagay kulankiisii ​​​​ugu horreeyay ee C2 isagoo wata fikir keli ah:
"Waa inaan u isticmaalnaa dhammaan mashiinnadan Behmaster macmiisha, dhib malaha kharashku.
Anaga, sifada qeexan ee GCP's compute-optimized C2 VMs ayaa ah waxqabad hal-saldhig ah oo aan la barbar dhigi karin. Sida laga soo xigtay Mark,
"Inta badan culeysyada shaqada ee WordPress-ku-xiran waa hal-threaded sidaa daraadeed ma isticmaali karno daraasiin CPUs ah si aan u barbar dhigno xisaabinta hal hawl."
Sidaa darteed, haysashada waxqabadka hal-saldhig ee ugu wanaagsan ee suurtogalka ah ayaa aad muhiim ugu ah martigelinta bogagga WordPress.
Ka dib qadar aad u badan oo bartilmaameed ah, waxaan ogaanay in C2's 3.8 GHz all-core joogtaynta turbo CPUs "si wax ku ool ah u labanlaabmay tirada shaqada ee hal VM uu qaban karo wakhti kasta" marka la barbar dhigo N1 VMs oo leh 2.2 GHz CPUs. Ka dib imtixaanada bartilmaameedka, waxaan isla markiiba la xiriirnay Google Cloud si aan u helno macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan helitaanka C2.
Gobollada la heli karo ee Tusaalooyinka C2
Bilowgii 2020, waxaan dhameeynay u wareejinta kaabayaasheena oo dhan C2 VMs ee gobollada la taageeray (eeg hoos). Tani waxay ka dhigan tahay haddii aad ku sugan tahay Waqooyiga Ameerika, Yurub, ama Aasiya, inuu jiro gobol ku qalabaysan C2 oo kuu dhow.
Sida Google Cloud uu uga dhigo C2 VM-yada laga heli karo gobollada kale, waxaan sii wadi doonaa u haajiridda kaabayaashayaga mashiinnada C2.
Degmada Changhua, Taiwan ( Aasiya-bari1)
Hong Kong ( Aasiya-bari2)
Tokyo, Japan ( Aasiya-waqooyi-bari1)
Osaka, Japan ( Aasiya-waqooyi-bari2)
Seoul, Kuuriyada Koonfureed ( Aasiya-waqooyi-bari3)
Mumbai, India ( Aasiya-koonfur 1)
Delhi, India ( Aasiya-koonfur2)
Jurong West, Singapore ( Aasiya-koonfur-bari1)
Sydney, Australia (Australia-koonfur-bari1)
Hamina, Finland (Yurub-waqooyi1)
St. Ghislain, Belgium (Yurub-galbeed1)
London, Boqortooyada Ingiriiska (Yurub-galbeed2)
Frankfurt, Jarmalka (Yurub-galbeed3)
Eemshaven, Netherlands (Yurub-galbeed4)
Zurich, Switzerland, (Yurub-galbeed6)
Montréal, Kanada (Northamerica-waqooyi-bari1)
São Paulo, Brazil (koonfur-bari1)
Santiago, Chile (koonfur-galbeed1)
Council Bluffs, Iowa, USA (us-dhexe1)
Moncks Corner, South Carolina, Mareykanka (us-bari1)
Ashburn, Virginia, Mareykanka (us-bari4)
Dalles, Oregon, Mareykanka (us-galbeed1)
Salt Lake City, Utah, Mareykanka (us-galbeed3)
Thanks to Google naqshadeynta VM ee dabacsan iyo injineeradeena cajiibka ah iyo kooxaha sysadmin, ka gudubka N1 ilaa C2 wuxuu ahaa bilaa xad. C2 ka dib, jawaabta macaamiishu waxay ahayd mid cajiib ah, waxaanan hubnaa in u guuritaanka Google-ka ugu dhaqsiyaha badan adeegyadiisa iyada oo aan loo eegin qiimaha ay tahay ikhtiyaarka ugu fiican ee macaamiisheena. Erayada Mark - "ma jirto dib u noqosho"!
Bixinta Waayo-aragnimada Martigelinta Ugu Dhakhsaha Badan Dhammaan Qorshayaasha (Maanta iyo Mustaqbalka)
"xawaaruhu waa wax aynaan marnaba tanaasuli doonin, iyada oo aan loo eegin kharashka". - Mark Gavalda, maamulaha guud ee Behmaster
Marka laga hadlayo tignoolajiyada, mustaqbalku aad buu u furan yahay. Behmaster waa mid aad u xiiseeya hal-abuurnimada goobta martigelinta WordPress, waxaana mar walba qiimeyneynaa tignoolajiyada ugu dambeeyay ee dhanka horumarinta khibradda macaamiisha, qanacsanaanta, iyo waxqabadka. Erayada Mark:
"Kooxdayadu waxay si dhow ula shaqeysaa Google Cloud si aan u hubinno inaan u tijaabinno alaabada cusub sida ugu dhaqsaha badan, si aad u hubiso inaan si dhow ugu fiirsaneyno horumarradii ugu dambeeyay ee kaabayaasha."
Shan sano laga bilaabo hadda, waa suurtogal in C2 VMs aysan noqon doonin adeegayaasha ugu dhaqsiyaha badan WordPress mar dambe. Haddii goobtaada lagu hayo Behmaster, kama welweli doontid taas sababtoo ah waxaan "mar horeba ugu guurnay goobtaada lacag la'aan" server-yadii ugu dambeeyay.
⚡️ Mashiinnada C2 aad u dhaqso badan Behmaster ayaa ka dhigaysa martigelinta la maamulay si ka dhakhso badan sidii hore ⬇️Riix halkan Tweet
Iyada oo xulashada ballaaran ee mashiinnada farsamada, shabakad aad u degdeg badan, iyo sifooyinka sysadmin-saaxiibtinimo, Google Cloud Platform wuxuu si dhakhso ah u noqonayaa bixiyaha kaabayaasha caanka ah ee adduunka martigelinta WordPress. Inkastoo Behmaster ma aha martigeliyaha kaliya ee adeegsada Google Cloud Platform, waxaan nahay ka kaliya ee bixiya mashiinada C2 dhammaan qorshooyinka.
Iyadoo Behmaster, dhib malahan haddii aad ku jirto qorshe bilow ah ama aad si buuxda u qorsheyso, boggaga WordPress waxa ay heli doonaan adeegayaasha ugu dhaqsaha badan ee GCP. Gaar ahaan, waxaad awoodi doontaa inaad si buuxda uga faa'iidaysato Google Cloud's C2 VMs iyo shabakadda Tier Premium laga bilaabo maalinta koowaad.
Macluumaad dheeri ah, fiiri imtixaanadayada bar-tilmaameedka C2!
Markaan eegno dhanka mustaqbalka, indhaheenu waxay dejinayaan hal-abuurnimo iyo dib-u-eegis iyadoo ujeedadu tahay inaan dhisno khibradda martigelinta WordPress ugu fiican uguna dhaqsaha badan adduunka.
Waxaan haynaa mashruucyo iyo astaamo badan oo dhuumaha ku jira, markaa iska hubi inaad iska diiwaangeliso warsidahayaga si aad ula socoto wax cusub Behmaster iyo wararka WordPress!
Sida Si Toos ah Loogu Soo Dejiyo Alaabta WooCommerce Jadwalka